Iibhampasi zepayipi zinoku-odolwa ngokwemidwebo yabathengi.
Amacandelo ahlukeneyo okubumba isitampu anokuyalelwa ngokwemizobo yabathengi.
Le clamp ineebhendi ezimbini ze-20mm kunye ne-32mm.Zizo zonke iiglasi zentsimbi kunye nazo zonke izinto ezingama-304.
Uhlobo lwaseBrithani lwe-hose clamp nge-welding
Umgangatho wezindlu zohlobo lwaseBrithani hose clamp nge-welding.
Ikhampasi yehose engavuthwanga yecuba
Imveliso ye-hose ye-hose-polar ye-non-polar yemveliso kuphela kwezinto ezingama-304, ezibonelela ukuchasana kakuhle kwe-kutu, ubunzima bokukhanya kunye nokufakwa okufanelekileyo.
Phambi kokuba isitampu esimile okwe-U sihlanganiselwe kwiplagi yentsimbi, ukwenzela ukuba kubonwe ngokuthe ngqo kwicala lokunyibilikiswa, kuyacetyiswa ukuba kuphawulwe indawo yokulungiselela kuqala, emva koko kuyi-weld to tywina, kwaye kufakwe indawo engezantsi yomzimba wombhobho wokuhambisa umzimba, kwaye ubeke ityhubhu, ubeke esinye isiqingatha seclass clamp kunye nesigubungelo, kwaye uqinise ngezikere. Khumbula ukuba ubambe ngokuthe ngqo isitya esisezantsi sepayipi.
Indibano esongelwe, itreyini yesikhokelo inokudityaniswa kwisiseko, okanye ilungiswe ngezikrufu.
Qala ufake umphezulu wombhobho wokuphelisa umzimba wombhobho ongaphezulu kunye naphantsi, ubeke umbhobho ukuba ulungiswe, emva koko ubeke isiqingatha somzimba wombhobho wesiqingatha esiphezulu, lungisa ngezikroba, ngesikhuselo esitshixwayo ukuthintela ukuguquka.